လြှပျစစျပစ္စည်းစည်းဝေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုနမူနာ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / လြှပျစစျပစ္စည်းစည်းဝေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုနမူနာ
လြှပျစစျပစ္စည်းစည်းဝေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုနမူနာ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 319 views
လြှပျစစျဂီယာသို့မဟုတ်ယူနစ် Build သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့် dynamometers များအတွက်အဖြစ်, Gyro, servomechanisms စံချိန် drives တွေကို, တာယာ actuators .
စစ်ကြော, စာမေးပွဲ, နှင့်ယူနစ်သတ်မှတ်ချက်များဖြည့်ဆည်းကြောင်းသေချာစေရန်ချောထုတ်ကုန် modify, သည်းခံစိတ်, နှင့်ဖောက်သည်အလို့ငှာတောင်းဆိုချက်များ.
အရပ်ဌာနစည်းဝေး, စီစဉ်, စိတျအပိုငျးသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များနှင့်, နှင့်စက်ကိရိယာများမှယူနစ်ကို fix, subassemblies, သို့မဟုတ်အဆောက်အဦများ, အစွမ်းသတ္တိကိုတူရိယာများနှင့်လက်အား tools တွေကိုအလုပ်သမား.
ရာထူး, စီစဉ်, နှင့်မှန်ကန်သောကျန်းမာပရိသတ်အဘို့အစိတ်အပိုင်းများကိုထိန်းညှိ.
link ကိုပြွန်, ကြိုး, နှင့်ဝါယာကြိုးများ, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ.
အိမ်မှာဓာတ်လှေကားကိုအပိုင်းပိုင်းအဆုံးအဖြတ်နာမကိုအမှီပြားနှင့် tag ကို Attach.
ဤအခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းများဖြင့်သို့မဟုတ်သေတ္တာမှအစားထိုးခံရဖို့စိတျအပိုငျး Disassemble.
သည်းခံစိတ် verniers ထွက်ရှာတွေ့မှဒေသများအကဲဖြတ်ရန်, နှင့် calipers.
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ream, countersink, စိတျအပိုငျးမြားနှငျ့အရပျကို-တှေ့ဆုံမူလီ-တွင်း, ပေါ့ပါးဖြစ်ကြောင်းပါဝါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းပုံနှိပျသုံးပြီး.
အစီရင်ခံစာ, အင်္ကျီအောက်ပိုင်း, နှင့်အစွမ်းထက်အစိတ်အပိုင်းများကို fit မှ, အစွမ်းသတ္တိနှင့်လက်တို့ကို tools တွေကိုအသုံးချဖို့.
ဆဲလ်တွေအကြား insulator တွင်လည်းထုပ်ပိုးသို့မဟုတ်ပြိုကျ.
ပရိုဂရမ်တပ်ဆင်ပစ္စည်းကိရိယာများ Perform သို့မဟုတ်လေ့, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်စက်ရုပ်များနှင့်စွဲစေစက်ရုပ်ကိရိယာများအဖြစ်.
ကြီးမားတည်နေရာသို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်ကြောင်း function အစိတ်အပိုင်းများ.
ဟုနေကြသည်အခွားအဘယျရှေးရှေးမှအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုတက်ကြွ-နားထောင်ခြင်း-တင်ပြ, ဖန်ဆင်းခံရသည့်အချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်လေးလည်း, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုတောင်းဆို, မှားအချိန်လေးမှာကြားဖြတ်ဘယ်တော့မှ.
critical အတွေးအခေါ်-လျှောက်ထားအကြောင်းပြချက်နှင့်အပြစ်အနာအဆာများနှင့်ချဉ်းကပ်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့အကြောင်းပြချက်, အတွေးအခေါ်များသို့မဟုတ်ပြဿနာကအခြားရွေးချယ်စရာအခြားနည်းလမ်း.
Active ကို-သင်ယူ-အသိပညာပစ္စုပ္ပန်နှင့်အလားအလာ problemsolving နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်အသစ်ကို၏ဖုံးကွယ်.
သင်ယူခြင်းနည်းပညာ-အသုံးပြုခြင်းနှင့်တိကျသောအခွအေနေညွှန်ကြားချက်သို့မဟုတ်သည့်အခါသစ်ကိုအချက်များသင်ယူခြင်းတငျပွ trainingPERtutorial နည်းစနစ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကောက်နေ.
ခြေရာကောက်-ခြေရာခံခြင်းအေဂျင်စီများ၏ထိရောက်မှုအကဲဖြတ် /, အခြားလူများ, သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုကုစားလုပ်ရပ်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ရန်.
လူမှုရေးအမြင်-သိမှတ်ကြလော့အခြားသူတွေ’ သူတို့ကျင့်သောကြောင့်သူတို့ကိုတုံ့ပြန်အဘယ်ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် comprehension.
အခြားသူတွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ control-ပြောင်းလဲလုပ်ရပ်များ’ ခြေလှမ်းများ.
အဆင့်မြင့်အနုစိတ်အခက်အခဲများ Problemsolving-ကွဲပြားခြားနားသွားနှင့်ရွေးချယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ချိတ်ဆက်အသေးစိတ်ကို critiquing နှင့်အဖြေကိုလျှောက်ထား.
အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-အဆောက်အအုံသို့မဟုတ်စားသုံးသူလိုလားအစေခံရန်ကိရိယာများနှင့်နည်းပညာများကို align လုပ်ဖို့.
အလုပ်တစ်ခု execute ဖို့လိုအပျဂီယာရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်း tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ type ကို.
installation-Installing Device များ, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုး, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် applications များ.
ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ-Creating ကွန်ပျူတာ applications များ.
ခြေရာခံခြင်းသည်-မြင်လျှင် dial စမ်းသပ်မှုစစ်ဆင်ရေး, စက်မှန်မှန်ကန်ကန်ရှိ operating ဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်သို့မဟုတ်အခြားအချက်ပြညွှန်းကိန်း.
ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးသုတေသန-Completing စစ်ဆေးမှုများနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ, ပံ့ပိုးပေး, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သို့မဟုတ်ထိရောက်မှုကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါသို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
analysis-ဖော်ထုတ်ခြင်းတစ် method ကိုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဘယ်လို functions တွေအတွက်လမ်းတိုးတက်မှု, အခြေအနေများ, အဆိုပါ setting ကိုနှင့်အတူရလဒ်များကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ.
systems စွမ်းဆောင်ရည်နည်းလမ်းများသို့မဟုတ်လက္ခဏာများအားသုံးသပ်ခြင်း-ဖော်ထုတ်ခြင်းအဖြစ်သင့်လျော်သောသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးတက်လာဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ, စက်ပစ္စည်း၏ရည်မှန်းချက်မှဆွေမျိုး.
ပုဂ္ဂလိကယခုအချိန်တွင်နှင့်အခြားသူများ Timemanagement-ထိန်းချုပ်ခြင်း’ တဦးတည်း၏အကာလ.
အကြောင်းအရာ၏စစ်ဆင်ရေးအရင်းအမြစ်များ-ရယူနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုအတွက်စောင့်ကြည့်, devices များ, နှင့်အရင်းအမြစ်များသတ်မှတ်ထားတဲ့ function ကိုလုပျဆောငျဖို့လိုအပျ.
ဝန်ထမ်းများ၏စစ်ဆင်ရေးတွန်းအားပေးအရင်းအမြစ်များ-ထူထောင်, သူတို့အလုပ်လုပ်အဖြစ်ရှေးရှေးရည်မှန်း, ကြောင်းအလုပ်တစ်ခုကိုများအတွက်အထိရောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအဆုံးအဖြတ်.
အကြီးတန်း High School တွင်ဘွဲ့ (သို့မဟုတ် GED သို့မဟုတ် High School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး)
ထက်ပိုပြီး 1 ခုနှစ်, To-တက်နှင့်အနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲအပါအဝင်
အောင်မြင်မှုများ / ကြိုးစားခြင်း – 89.04%
ဆုံးဖြတ်ချက် – 85.75%
စီမံကိန်း – 91.38%
အာဏာ – 85.44%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 89.45%
အခြားသူများများအတွက်ပြဿနာ – 87.58%
လူမှု Alignment – 87.99%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 89.01%
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – 83.65%
ဘက်စုံ / လွတ်မြောက်ရေး – 85.59%
တည်ငြိမ်ခြင်း – 90.38%
အနက်ပေါ်အာရုံစူးစိုက် – 91.04%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 88.94%
လွတ်လပ်ရေး – 83.97%
တီထွင်မှု – 81.88%
စဉ်းစား – 85.55%